Toll Free နံပါတ်သို့ Search Keyword ကိုရည်ညွှန်းခြင်း
ဖုန်းဖြင့် SEO ပြောင်းလဲခြင်းကိုခြေရာခံခြင်း
တနင်္ဂနွေ, ဇူလိုင်လ 11, 2010 အင်္ဂါနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 18, 2012 Douglas Karr
ရိုးရာမီဒီယာတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရောင်းချခြင်းကိုပြုလုပ်သောဤလတွင်ဖောက်သည်အသစ်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်တိုက်ရိုက်မေးလ်တို့ဖြင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုခြေရာခံရန်အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းမှာကူပွန်ကုဒ်နံပါတ်သို့မဟုတ်ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သောလျှော့စျေးကုဒ်ကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သျောလညျးအဝေးဆက်သွယ်ရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနရှိသည်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အတူ, အဓိကနည်းလမ်းအသုံးပြုဘဏ်များ၏ဝယ်ယူရန်ဖြစ်သည် သေဆုံးသူဖုန်းနံပါတ်များ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတခုစီအတွက်မတူညီတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တခုကိုအသုံးပြုပါ။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုများအရ ၀ က်ဘ်ဆိုက် visitors ည့်သည်များအနေဖြင့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ပုံစံသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ခြင်းထက်ဖုန်းခေါ်လိမ့်မည်ဟု (ပြသခဲ့သည်)ဒေသခံရှာဖွေမှုအပေါ် 40%).
၎င်းတွင်သုံးစွဲသူ၌ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များစွာရှိသည်။ ရက်ပေါင်း ၃၀ မပြည့်မှီသော့ချက်စကားလုံးတစ်လုံးအတွက်သူတို့ site သို့လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းကို ၁၅% တိုးမြှင့်ထားသည်။ တိုးချဲ့လည်ပတ်မှုများတိုးမြှင့်သည်ကောင်းပေမယ့်ကျွန်ုပ်တို့အသွားအလာကိုအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲမှုများဖော်ထုတ်ရန်လိုအပ်သည်။ Search Engine optimization ၏ကုန်ကျစရိတ်သည်တန်ဖိုးကိုဒေါ်လာထည့်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်နားလည်ရမည်။ ဖြေရှင်းနည်းမှာနည်းစနစ်နှစ်ခုနှင့်လက်ထပ်ရန်ဖြစ်သည် သေဆုံးသူ - အခမဲ့နံပါတ်များ.
Tags: ခေါ်ဆိုမှုခြေရာခံခြင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြောင်းလဲနေသောဖုန်းနံပါတ်များဖုန်းကိုခြေရာခံရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimizationseo
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Blogger! DMCA တိုင်ကြားချက်လှုပ်ရှားမှု
12:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 11
Doug၊ ကျွန်ုပ်သည်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုသာရှိသော်လည်းရိုးရှင်းသော“ Ask for Amy” (သို့မဟုတ်)“ Ask for Jim” တို့ကိုသူတို့၏အခမဲ့ဖုန်းနံပါတ်သို့တင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ကုမ္ပဏီမှာအေမီဒါမှမဟုတ်ဂျင်မ်မရှိပေမယ့်သူတို့ဖြေတဲ့အခါသူတို့ကလူတွေဘာကိုနာမည်ပေးတာကိုနားထောင်ပြီးသူ / သူမအခုမရှိဘူးလို့ပြောပေမယ့်ငါမင်းကိုကူညီနိုင်မယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့အမည်ကလူတွေကိုဘယ်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကိုတုံ့ပြန်နေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်။
တူညီသောအရာ extension အတုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ် 800-555-5555 x3542 ကိုခေါ်ပါ။ extensions မရှိပါ 3542 ဒါပေမယ့်သင်သိထားသင့်သမျှကိုပြောပြတယ်။
12:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 34
ကျနော်တို့တိုက်ရိုက်မေးလ်, Patric နှင့်အတူတူပင်လုပ်ခဲ့တယ်! ကျနော်တို့ကအတုအမည်နှင့်ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူအက္ခရာများလက်မှတ်ထိုးလေ့ရှိတယ် - ထို့နောက်ကင်ပိန်းနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုကိုခြေရာခံဖို့အဲဒီကိုသုံးပါ။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုလိုအပ်နေသည့်ယနေ့ခေတ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ဘုံအလေ့အကျင့်ကိုယခုသိပ်တန်ဖိုးမထားကြောင်းသေချာသည်။
14:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 33
Doug ဂရိတ် post ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနည်းလမ်းကိုအမျိုးမျိုးအသုံးပြုခဲ့သည်။ http://www.seoverflow.com/blog/call-tracking/roll-your-own-phone-call-tracking-program-it-is-easy/
ခဏလေးပဲ။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောနည်းဗျူဟာဖြစ်ပြီးဖောက်သည်များအားသင်၏တန်ဖိုးကိုအလွယ်တကူသက်သေပြနိုင်သည်။ ၎င်းကိုအသုံးချသူများအတွက်ထို script နှင့် Twilio ကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။